यी ७ बानी आजै हटाउनुहोस्, नत्र हुन्छ सिधै मधुमेह वा डायबिटिजको समस्या - dautarimedia.com
यी ७ बानी आजै हटाउनुहोस्, नत्र हुन्छ सिधै मधुमेह वा डायबिटिजको समस्या
मधुमेह किन हुन्छ ? भनेर कसैले सोधे, कुनै पनि विज्ञसँग यसको एउटा मात्र जवाफ छैन किनभने निकै धेरै कारणहरु गर्दा मधुमेह हुन्छ। खासगरी अस्वस्थ्य खानपान र अस्तव्यस्त जीवनशैली हुनु मधुमेह रोग हुनुको मुल कारण हो ।
हामी जीवनयापनका क्रममा कति गल्ती गरिरहेका हुन्छौ, जसले मधुमेहको जोखिममा पार्छ। यहाँ हामी त्यस्तै दैनिक जीवनमा गरिने ७ गल्तिहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ जसले मधुमेह गराउँछ। यी सात गल्तिहरुका कारणले हुने मधुमेह रोक्न खानु पर्ने ७ खानाको बारेमा पनि हामी यसमै चर्चा गर्नेछौँ:
के हुन् त ति गल्ती ? ७ गल्तिहरु तपाईले आफ्नो दैनिक जीवनमा गरिरहनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् र सकेसम्म यी सात गल्तिहरुलाई कम गर्ने तर्फ ध्यान दिनुहोस् । कुनै कारणवश या विशेष दिनमा यस्तो कार्य हुनु त्यति खराब नै नहोला तर आफ्नो दैनिक जीवन नै यस्तो छ भने चै बेलैमा सजग हुनै पर्छ ।
राती अबेरसम्म बस्नु: राती अबेरसम्म बस्ने, पर्याप्त निन्द्रा नलिने, राती बस्दा चुरोट सेवन गर्ने, रातको समयमा भोजन गर्ने जस्ता बानी छ भने त्यसले म’धुमेहको जोखिममा पार्छ ।
घामको कमी: शरीरमा भिटामिन ‘डी’ को कमी भएका मानिसहरुलाई टाइप-२ मधुमेहको खतरा अधिक हुन्छ । खासगरी घाममा नबस्ने व्यक्तिहरु यसको जोखिममा परेका छन्। घाम भिटामिन डिको प्राकृतिक स्रोत हो । बेला बेला घाममा बस्ने गर्नु शरिरका लागि फाइदाजनक हुन्छ।
तनाव: तनाव तथा चिन्ता म’धुमेहको एउटा प्रमुख कारण हुनसक्छ । किनकी तनाव तथा चिन्ताले शरीरले कार्टिसोल नामक हर्मोनको उतपादन गर्छ, जसले इन्सुलिन एक्टिविटीलाई बढाउँछ, यसले रगतमा चिनीको मात्रालाई समेत बढाउँछ।
टेलिभिजनको लत : पिट्सवर्ग विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले जनाए अनुसार टिभीको सामु विताएको हरेक घण्टाले मधुमेहको खतरा चार गुणा बढाईदिन्छ ।
Previous: आजबाट अर्को आईपीओ खुल्यो, कतिसम्म दिनमिल्छ आवेदन ?
Next: नेपालमा दुर्लभ घटना : सोमिकाले जन्माइन् एकै पटक ५ वटा बच्चा